MA-688 Real-Time Quantitative Thermal Cycler သည် maintance-free LED ကိုစိတ် ၀ င်စားစရာအလင်းအရင်းအမြစ်အဖြစ်ပြင်ပကွန်ပျူတာမှအမြင့်ဆုံးထိရောက်မှုနှင့်အဆင်ပြေစွာ အသုံးပြု၍ အခြေခံဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသန၊ ရောဂါဖြစ်ပွားစေသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၊ မော်လီကျူးပုံတူကူးခြင်း၊ ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ စစ်ဆေးခြင်း၊ ဗီဇဖော်ပြခြင်း၊ မျိုးဗီဇရိုက်ခြင်းနှင့်မျိုးဗီဇစစ်ဆေးခြင်း၊ အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံမှုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ကပ်ရောဂါစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အခြားနယ်ပယ်များ။
MA-688 Real-Time သည် MAPC 6000 စီးရီးနည်းပညာပလက်ဖောင်းကို အခြေခံ၍ qPCR အစပြုသူများနှင့်သေးငယ်သောဓာတ်ခွဲခန်းများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်ဒီဇိုင်းအပြည့်အစုံပါ ၀ င်သောချွေတာနိုင်သော PCR တူရိယာဖြစ်သည်။
ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောကိုယ်ထည်၊ ၄၈x ၂.၂ မီလီမီတာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံပုံစံအစီအစဉ်၊ ၃/၄ အရောင်ချောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည့်လိုင်းများ၊ MA-Smart သည်သင်၏စမ်းသပ်မှုများအတွက်အချိန်နှင့်စီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပေးသည်၊ သင့်ကိုချောင်းအရေအတွက် PCR စမ်းသပ်မှုကိုကြိုတင်ဖွင့်ရန်ကူညီသည်။
ဂျာမန် high-end PT1000 အပူချိန်အာရုံခံနှင့်အစွန်းအပူလျော်ကြေးပေးရန်အပူချိန်နှင့်အတူပေါင်းစပ်အရည်အသွေးမြင့် semiconductor thermoelectric module ကို
Multi- ရည်ရွယ်ချက် function ကို 2.Super
multi-point အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ Peltier အခြေစိုက်စခန်းအပူ module ကို optimization စမ်းသပ်မှု၏ gradient ကိုအပူချိန် function ကိုပေးနိုင်ပါသည်
3. ထူးခြားသော optical ဒီဇိုင်း
Maintance-free LED စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အလင်းအရင်းအမြစ်၊ မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖိုင်ဘာ၏ fluorescence signal ကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီထုတ်လွှင့်ခြင်း 48-hole, high signal-to-noise အချိုး photodiode ဖတ်ခြင်း signal ကို, အစွန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိစေရန်
4. စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်၊ ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သော software setup interface
လျင်မြန်သောတုန့်ပြန်မှု parameter သည် setting ကို wizard ကို, အလိုလိုသိနမူနာ setting ကို wizard ကို, အစွမ်းထက်စမ်းသပ်ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ function ကို
၎င်းသည်အပူပေးရန်မလိုအပ်ပါ။ နှင့်အသက် 30 အတွင်းစမ်းသပ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဥာဏ်ရည်ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ အစီရင်ခံစာရလဒ်ကို ၁၀ မိနစ်အတွင်းပြီးစီးနိုင်သည်
Software ကို Function & နေ့စွဲထုတ်ယူခြင်း
PCR amplification ထိရောက်မှု
မျိုးဗီဇ mutation (စိစစ်)
ယေဘုယျရှုထောင့် 466 * 310 * 273mm
အလေးချိန် 18 ကီလိုဂရမ်
operating ပတ်ဝန်းကျင် parameters တွေကို
ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 18 ℃ ~ 30 ℃
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သိုလှောင်မှုအပူချိန် -20 ~ 55 ℃
Tube စွမ်းရည် 48 * 0.2ml
ကုန်ပစ္စည်းများသုံးစွဲခြင်း 0.2ml PCR ပြွန်။ 8 * 0.2ml PCR ပြွန်
အပူချိန်တိကျမှန်ကန်မှု <0.1 ℃
<± 0,25 ± အပူအမြန်နှုန်း
4.5 ℃ / S မြန်နှုန်းအေး
3 ℃ / S အပူအအေး
Semiconductor mode ပူအဖုံး
မြင့်မားသောတောက်ပသော LED Detector
မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖိုင်ဘာ နမူနာများ၏ linear အကွာအဝေး0အိုင်09-10
မိတ္တူများ နမူနာ linear
R ကို> 0,99 ထပ်ခါတလဲလဲစမ်းသပ်ခြင်းနမူနာ
CV <၁၀၀% စိတ်လှုပ်ရှားလှိုင်းအလျားပထမ ဦး ဆုံးရုပ်သံလိုင်း 70 470nm ± 10nm
ဒုတိယရုပ်သံလိုင်း： 525nm ± 10nm
တတိယရုပ်သံလိုင်း 70 570nm ± 10nm
စတုတ္ထရုပ်သံလိုင်း 20 620nm ± 10nm ထောက်လှမ်းလှိုင်းအလျားပထမ ဦး ဆုံးရုပ်သံလိုင်း 20 520nm ± 10nm
ဒုတိယရုပ်သံလိုင်း 70 570nm ± 10nm
တတိယရုပ်သံလိုင်း 20 620nm ± 10nm
စတုတ္ထရုပ်သံလိုင်း 70 670nm ± 10nm
Website: www.chkbio.cn E-mail: admin@chkbio.com CHK-800 အလိုအလျောက်ဘူမိအက်ဆစ်ထုတ်ယူစက်
ရှေ့သို့ MA-6000 Real Time PCR စနစ်